यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सूचना लुकाउने सल्लाहकार, पर्लान् त कारबाहीमा ?
२६ असार २०७६, बिहीबार १२:५३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार राति नेपाल टेलभिजनको अन्तर्वार्तामा भने, ‘मलाई पछि मात्र थाहा भयो र त्यस सम्बन्धमा भारतले कूटनीतिक प्रयासहरू र विभिन्न ठाउँमा संवादहरू अघि बढाएको रहेछ । त्यो कुराबाट पनि मलाई अनभिज्ञ नै राखियो ।’ तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणबारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय फिर्ता गरिएपछि प्रधानमन्त्रीले कसैले पत्र नपठाएको दाबी गरेका थिए, तर उनको भनाइ सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै सञ्चारमाध्यमहरूले भारतले पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी झुटो सावित गरिदिए ।
त्यसपछि मात्र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतीय पत्र आउनु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए । यो विषयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत सरकारको कदमप्रति आलोचना भएको थियो । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई गलत सल्लाह दिने र सूचना लुकाउनेमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले विषादी प्रकरणमा आफूलाई झुक्याइएकाले लज्जित हुनुपरेको भन्दै माफी पनि मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भनेको सरकार प्रमुख हो । सरकार प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति सबैका चासो हुन्छ । जनताले आशा गरेका हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले भनेपछि पूरा हुन्छ भनेर । अब भारतीय फलफूल र तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षण नगर्न भारतको पत्रबारे जानकारी नदिनेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् ? भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । ओली दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् । यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई पनि सूचना लुकाउनेको जालोमा परेर उनले किन यति निरीह अभिव्यक्ति दिए भन्ने विषयले अहिले बौद्धिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह र सूचना दिनेका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायत हुन् । यस्तै, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, खानेपानी मन्त्री विना मगरलगायत छन् । सबैले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूले नै सूचना लुकाउँदा प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक फोरमबाटै आफू राज्य सञ्चालनमा अनभिज्ञ भएको बताउन थालेका छन् । आजै रिपोर्टर्स क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले दूतावासको पत्रबारे परराष्ट्रमन्त्रालयको विषय भएको बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हुन् । ज्ञवाली तत्कालीन एमालेका सचिव हुन् ।
सरकारको बदनामी र एकपछि अर्को निर्णयमा पछि हट्न परेकाले सत्तारुढ नेकपाको साखसमेत दिनदिनै गुमेको छ । जनतामा अलोकप्रिय भइरहेको छ । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले गर्दै आएका मनोमानीपूर्ण निर्णय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । पैसा, शक्ति र प्रलोभनबाट परिचालित हुने कर्मचारीतन्त्रको हातमा मात्र देश छाडेर कहिल्यै विकास र सुशासन नहुने भन्दै ओलीमाथि आफूलाई झुक्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न दबाब बढ्दै गएको छ ।
विप्लवसँग वार्ता गर्न तीन सम्पर्क सुत्र : आ-आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरु परिचालन